Panasonic Lumix GH5S, igwefoto na-enweghị enyo, vidiyo 4k yana ISO nke 51.200 | Akụkọ akụrụngwa
Panasonic Lumix GH5S, igwefoto na-enweghị enyo, vidiyo 4k yana ISO nke 51.200
Anyị na-aga n'ihu na-ekwu maka ozi ọma na ụbọchị ndị a na-egosi na CES nke a na-eme, otu afọ ọzọ, na Las Vegas. Ugbu a ọ bụ oge nke onye nrụpụta Japan Panasonic, onye site na mpaghara Lumix, jisiri ike wepụta otu ihe dị mkpa n'ahịa. Ihe omuma ohuru nke ulo oru a gosiputara bu GH5S, igwefoto nke n’enye anyi ogo nke ruru 51.200, n’enweghi ISO gbaturu agbatị, ekele diri igwe ihe ohuru nke jikotara ohuru Panasonic a Ihe mmetụta nke na-etinye GH5S O nwere mkpebi nke 10 mpx, a na-echekwa ndị ọkachamara vidiyo.
Dabere na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya, igwefoto a na-enye anyị nnukwu nghọta na oyiyi na vidiyo karịa ụdị ọ bụla ọzọ sitere na ụlọ ọrụ Japan. Na usoro ndekọ na / ma ọ bụ ijide usoro ọ na-enye anyị bụ: 4: 3, 17: 9, 16: 9 na 3: 2 si otú a na-emegharị mkpebi niile ndị ọkachamara vidiyo nwere ike ịdị mkpa n'oge ụfọdụ. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị nkwado maka 14-bit RAW yana teknụzụ Dual Native ISO ejiri iji kpochapụ mkpọtụ.
Banyere mkpebi ndekọ, GH5S na-enye anyị nkwado maka ịdekọ na 4k na 60 fps, na-edekọ na 4k na 30 fps 4: 2: 2: 2: 10 bits na 4: 2: 0 8 bits 4k na 60 fps. Ọ na-enye anyị ndekọ na 4: 2: 2: 2 10-bit 400 Mbps All-Intr Ain na 400 Mbps 4K 30p / 25p / 24p na 200 Mbps All-Intra na Full HD. Ihe nlere a na-enye anyị ohere ịdekọ ma na 4k na mkpebi Full HD, na-enweghị ụdị oke ọ bụla. Iji weghara ngwa ngwa, ihe nlere a na-enye anyị ohere dekọọ na mkpebi zuru HD na 240 fps.
Banyere ngwaike, n'ime GH5S anyị na-ahụ mgbawa 4.1 bluetooth na njikọ wifi 802.11ac. Elu nke ime ụlọ ka emere a Magnesium alloy, na-eguzogide uzuzu yana splashes na kefriza. Ọ na-enye anyị oghere SD abụọ, ụdị HDMI ụdị A na njikọ USB-C. Sistemụ autofocus, otu akụkụ kachasị mkpa ịtụle, bụ otu ihe ahụ dị na mbụ, GH5, yabụ isi ihe dị iche na onye bu ya ụzọ hụrụ na arụmọrụ nke igwefoto na obere ọkụ.
El Ọnụ GH5S ga-abụ $ 2.499sy na-atụ anya ịda ahịa na njedebe nke February.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Panasonic Lumix GH5S, igwefoto na-enweghị enyo, vidiyo 4k yana ISO nke 51.200
Ihe ohuru Elgato Thunderbolt 3 mini Dock kwadoro